ဒီနေ့ဟာ အာဏာရူးတစ်စု ပြည်သူ့အာဏာကို လုယူသွားတာ (၁၉၀) ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တယ်။… – PVTV Myanmar
ဒီနေ့ဟာ အာဏာရူးတစ်စု ပြည်သူ့အာဏာကို လုယူသွားတာ (၁၉၀) ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တယ်။
Like – 2.1K Share – 130
2021-08-10 at 8:00 AM
2021-08-10 at 8:01 AM
ဖွားဖွားအေး အေး says:
ယနေ့ထိ တရက် မှ မပျက်
Khin Thidar Moe says:
2021-08-10 at 8:06 AM
NUG နဲ့ CRPH ကိုအကြွင်းမဲ့ ယုံတယ်
မှားတာတွေ.. မှန်တာတွေ လိုက်ပြောနေရအောင် အစ်ကိုတို့.. အစ်မတို့.. က စောက်ဆရာကြီးတွေလား..
ဒါတွေမြင်ရင် လုံးဝ ရှောင်ပါ
၁) အချို့ကသွေးအေးသွားကြတယ်..နဲ့ စမယ်..
၂) လူတွေဟာ တော်လှန်ရေးကို မေ့ပြီး ကိုဗစ်ကိုပဲ အာရုံစိုက်လာကြပြီ..နဲ့စမယ်..
၃) NUG ဟာ မအလ နဲ့ကြိတ်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့ သတင်းကြားတယ်..နဲ့စမယ်..
၄) NUG ဟာ PDF တွေအပေါ် ဘာမှ တာဝန်ယူတာ မတွေ့သေးဘူး..နဲ့စမယ်..
၅) သည်ပုံအတိုင်းသာ ဆက်သွားရင် ၈၈ တုန်းကလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်..နဲ့စမယ်..
၆) မရေးတော့ဘူးဆိုပြီးနေခဲ့တာပါ.. ဒါပေမယ့် အခုအခြေအနေက ရေးမှ ဖြစ်တော့မှာမို့.. နဲ့စမယ်..
၆) CDM တွေကို ခိုင်းတုန်းက ခိုင်းပြီး ဘာမှ တာဝန်ယူတာ မတွေ့ဘူး..နဲ့စမယ်..
ပြောချင်တာက ပါးစပ်ပိတ်.. ငြိမ်ငြိမ်နေ..
ကိုယ့်လူတို့ စိတ်တိုင်းကျဖို့ လုပ်ပေးရအောင် သူရို့က ကိုယ့်လူတို့ရဲ့ မယားပါသားတွေ မဟုတ်ဘူး..
မကျေနပ်ရင် စကစ ဘက်သွားနေ..
2021-08-10 at 8:12 AM
2021-08-10 at 8:49 AM
fighting. we will win.
ဦးးးဦးးး ျပသာဒါးးး says:
2021-08-10 at 9:20 AM
ဒီေန႔ဟာျမန္မာျပည္အနာဂတ္ကုိေခြးဆဲြသြားတာေတာင္ ရက္ေပါင္း190ေတာင္ျဖစ္သြားၿပီ အာဏာ႐ွင္စနစ္မုခ်က်႐ူံးရမည္